सरकारलाई एमालेको प्रश्न : मेलम्ची खानेपानी र गौरवका आयोजनाको अवस्था के छ ? – Nepal Views
सरकारलाई एमालेको प्रश्न : मेलम्ची खानेपानी र गौरवका आयोजनाको अवस्था के छ ?
‘‘सुकुमबासीहरुलाई लालपूर्जा दिने, मेलम्ची खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था के छ ? यसको जवाफ दिने मन्त्री पनि छैन’’
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोचना गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा एमालेले गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेको तेस्रो महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको हो।
बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पार्वती रावलले मन्त्रिपरिषद्मा भएको ढिलाइले विकास निर्माणका साथै जनताको जनजीविका लगायतका विषयहरुलाई ओझेलमा पारेको बताइन्।
‘‘सुकुमबासीहरुलाई लालपूर्जा दिने, मेलम्ची खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था के छ ? यसको जवाफ दिने मन्त्री पनि छैन’’, उनले भनिन्। रावलले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्न नचाहेको आरोप पनि लगाइन्।
यसैबीच, एमालेले आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि विरोध जनाएको छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले एमालले गरेको संसद अवरोधप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा अवरोध हुँदा सांसदहरुको अधिकार हनन् भएको बताए।
१८ असोज २०७८ १४:०३
एमालेलाई मीनेन्द्र रिजालको जवाफ: आफ्नै अनुहार हेर्नुस्, हामीसँग किन कुण्ठा पोख्नुहुन्छ ?
काठमाडौंको मुहार फेर्छु : बालेन शाह (अन्तर्वार्ता)
बालेनसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ : माधव नेपाल
शहीदले देखेका सपना अझै पूरा भएका छैनन् : प्रचण्ड